Rosiana Mpanao Gazety Voaroaka Noho Ny Nitaterany Tetikasan-Javakanto Ho An’ny Ankizy Niafara Tany Am-panariana Fako · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2017 1:12 GMT
Vao haingana no hitan'ny mpanao gazety miasa ho an'ny tambajotranà fahitalavitra eo an-toerana vatsian'ny governemanta Rosiana fa maherin'ny 3.000 ireo ravaka nataon'ny ankizy tamin'ny hazon'ny fialantsasatra no noravàn'ny manampahefana ao an-tanànan'i Chelyabinsk, namarana tamin'alahelo ny fifaninanana iray natao ho an'ny daholobe izay noheverina ho fanaovana dokam-barotra ho an'ny Fifaninanana Rosiana Fikorisàna Artistika ambony Ranomandry sy fametrahana ireo ravaka tamin'ny hazo nanodidina ny tanàna.
Raha tsy ampy hanongotra anao amin'ny kiakiaky ny fialantsasatrao ny tatitra momba ny ankizy nahita ireo firavaka namboariny teny amin'ny fanariana fako, niady mba tsy handrotsa-dranomaso rehefa niezaka nametraka sy naka indray ireo zavakantony, dia angamba ity antsipirihany manaraka ity no hanao izany : voaroaka tsotra izao fotsiny roa andro taty aoriana ireo mpanao gazety roa tomponandraikitra tamin'ny famoahana ilay tantara.
Tsy nalefa tao amin'ny tambajotram-baovao “1OBL” velively, fantson'ny fahitalavitra vatsian'ny fanjakana vola ao Chelyabinsk , ny ampahany amin'ilay olana, nefa niara-niasa tamin'ny REN-T V ny mpanangom-baovao roa an'ilay fahitalavitra mba hanambatra azy io. Nalefa tamin'ny 6 Desambra ny tantara.
Ireo ankizy ao Chelyabinsk mahita ireo ravaky ny hazo nataony nariana tany anaty dabam-pako. Rakitsary: REN-TV
Roa andro taty aoriana, natombok'i Oksana Shevchenko filohan'ny efitrano fanoratan'ny 1OBL taminà fanambarana masiaka ny fivoriana isaky ny maraina fanaon'ny mpiasa, nanazavany fa amin'ny faran'ny volana dia tsy hanavao ny fifanarahana amin'i Nadezhda Zalevskaya sy Svetlana Sverchkareva , ireo mpanao gazety roa izay niasa tamin'ilay ampaham-baovao nalefa tamin'ny REN-TV ny orinasa.
“Namidin'ny fantsona iray an'ny Governemanta taminà tambajotra nasionaly izay Manao toy ny fako ny Fifaninanana Rosiana Fikorisàna ambony Ranomandry ny tantara! Nolotointsika ny lazan'ny Fifaninanana Rosiana Fikorisàna ambony Ranomandry! Henonareo ve izay lazaiko!?” Hoy i Shevchenko niteny tao aminà lahatsary voarakitra tamin'ny findain'ny olona tao amin'ilay fivoriana ary tafaporitsaka tao amin'ny REN-TV taty aoriana.
Niteny koa i Shevchenko raha niteny tao amin'ny efitrano fanoratana, fa nisy olona iray mitondra ny anarana hoe “Evdokimov” niantso an-katezerana an-telefaonina ny talen'ny 1OBL, nitaraina momba ilay ampaham-vaovao. Mino ny Ren-TV fa manondro an'i Vadim Evdokimov, Lietnà Governoran'i Chelyabinsk, izay mitantana ny raharaham-bahoaka ao an-tanàna izy. Rehefa niantso an'i Evdokimov ny REN-TV mba hanontany azy ny fifandraisany amin'y 1OBL, nialàny ny fanontaniana ary napetrany ny telefaona.
Taorian'ny nanombohan'ny REN-TV nanatona manampahefana isan-karazany tao amin'ny Governemantan'i Chelyabinsk, nilaza i Zalevskaya sy Sverchkarefa fa nanomboka nandray antso fampitahorana an-telefaona ry zareo. Ho valin'izay, voalaza fa nanaiky hanampy ireo mpanao gazety hiaro ny asany ny Filankevitra Federalin'i Rosia sy ny Fiombonan'ny Mpanao Gazety Rosiana.
Nadezha Zalevskaya sy Svetlana Sverchkareva mpanao gazetin'ny 1OBL. Sary Vkontakte
Ao amin'ny Vkontakte, tambajotra malaza indrindra any Rosia, nangiana tanteraka momba ilay fanafintohinana ny efitrano fanoratana. Tsy “mpinamana” amin'ilay tranonkala akory i Nadezha Zalevskaya sy i Svetlana Sverchkareva, ary tsy nandefa na inona na inona ao momba ny olany any am-piasana iry voalohany. Amin'ireo mpampiasa Vkontakte 29 voasoratra anarana ho toy ny mpiasa ao amin'ny 1OBL, roa monja ireo olona hafa tsy nanoratra na inona na inona ampahibemaso momba ilay adihevitra. Amin'ireo toejavatra roa ireo, nizara ny tantara momba ny famoretana sy nanampy hafatra fohy nefa manohana mivantana an'ireo mpiara-miasa aminy ireo zatovovavy tao amin'ilay efitrano fanoratan'ny REN-TV.
Ny filohan'ny efitrano fanoratana, Oksana Scevchenko, izay zara raha nahatàna ny hatezerany tao amin'ity fivorian'ny mpiasan'ny 1OBL tamin'ity herinandro ity, dia tsy nandefa na inona na inona ampahibemaso hatramin'ny 4 Desambra, fony izy nizara andianà karatra firariantsoa Sovietika misy sarinà vontsira, bitro ary orsa.